Philips HR1811 Juicer | Buy online | SHOP.COM.MM
Yin Wai Khine
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေထဲမှာ Philips ကိုအရမ်းသဘောကျပါတယ်။ တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်စက်တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးလည်းမကြီးပါဘူး။ Read more Hide
This Philips juicer certainly looks very good and it works quickly and efficiently. Read more Hide
Philips is good
တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ဖျော်စက်လေးပါ။ အထဲထဲမှာကျယ်လို့ အသီးဖျော်ရည်များများဖျော်နိုင်တယ်။ Read more Hide
ဒီဖျော်ရည်စက်လေးက များများလည်း ဆန့်ပြီး သုံးရလည်းအဆင်ပြေတယ်။ Read more Hide
Introducing the amazing Philips HR1811 Blender. This product will give you the maximum value out of its extremely advanced and useful features. This product has an amazing futuristic design and it is made out of only the finest material to ensure top grade quality.
350 W juicer with2speed options for soft and hard fruits
Specifications of HR1811 Juicer